यहोवाका साक्षीहरू किन इस्टर मनाउँदैनन्‌? | अक्सर सोधिने प्रश्नहरू
यहोवाका साक्षीहरू किन इस्टर मनाउँदैनन्‌?
गलत धारणा: यहोवाका साक्षीहरू ख्रीष्टियन होइनन्‌, त्यसैले तिनीहरू इस्टर मनाउँदैनन्‌।
वास्तविकता: येशू ख्रीष्ट हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौं र हामी ‘राम्ररी उहाँको पदचिन्ह पछ्याउन’ सक्दो कोसिस गर्छौं।—१ पत्रुस २:२१; लूका २:११.
गलत धारणा: येशूलाई मृत्युबाट ब्यूँताइयो भनेर तपाईंहरू विश्वास गर्नुहुन्न।
वास्तविकता: येशू पुनर्जीवित हुनुभयो भनेर हामी विश्वास गर्छौं। येशू पुनर्जीवित हुनुभयो भन्ने कुरामा विश्वास नगरी ख्रीष्टियन बन्न सकिंदैन भनेर हामीलाई थाह छ। त्यसैले हामी अरूलाई प्रचार गर्दा पनि यो कुरा विशेष जोड दिएर बताउँछौं।—१ कोरिन्थी १५:३, ४, १२-१५.
गलत धारणा: इस्टरको बेला सबै जना रमाइलो गर्छन्‌। तर तपाईंहरू आफ्ना छोराछोरीले इस्टरको बेला रमाइलो गर्न नपाउँदा पनि केही वास्ता गर्नुहुन्न।
वास्तविकता: हामी आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छौं। तिनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन र खुसी राख्न हामी सक्दो प्रयास गर्छौं।—तीतस २:४.
इस्टर बाइबलमा आधारित पर्व होइन।
येशूले उहाँको मृत्युको सम्झना गर्नू भनेर आज्ञा दिनुभयो, पुनर्जीवित भएको दिनको होइन। हामी हरेक वर्ष बाइबलको चन्द्र पात्रोअनुसार येशूको मृत्युको वार्षिकी मनाउँछौं।—लूका २२:१९, २०.
इस्टर पर्वको सुरुवात प्रजननसित सम्बन्धित संस्कृतिबाट आएको हो भनेर हामी विश्वास गर्छौं। त्यसैले यो पर्व परमेश्वरको लागि अस्वीकार्य छ। यहोवा परमेश्वर हामीले उहाँको मात्र उपासना गरेको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई मन नपर्ने रीतिथिति मुछिएको उपासना देखेर उहाँ घिनाउनुहुन्छ।—प्रस्थान २०:५; १ राजा १८:२१.
बाइबलमा ठोस कारण भएकोले नै हामी इस्टर पर्व मनाउँदैनौं। बाइबलले हामीलाई अन्धाधुन्ध मानव संस्कृतिको पछि लाग्नुको साटो “विवेक” चलाउन प्रोत्साहन दिएको छ। (हितोपदेश ३:२१; मत्ती १५:३) अरूले हामीलाई इस्टरको विषयमा सोध्दा हामी आफ्नो अडान तिनीहरूलाई स्पष्टसित बताउँछौं तर हामी उनीहरूको इच्छाको पनि कदर गर्छौं।—१ पत्रुस ३:१५.